Okusha Martech Zone Ilogo ye-2019 | Martech Zone
Okusha Martech Zone Ilogo ye-2019
NgeSonto, uJanuwari 6, 2019 ULwesine, May 7, 2020 Douglas Karr
Enye indawo engingazange ngitshale imali ukuyifaka uphawu yileli sayithi. Ngenkathi i-my agency benginophawu olukhulu engiluthandayo, futhi sisebenza nawo wonke amaklayenti ethu ekubekeni uphawu lwawo, bengingenawo nje umkhawulokudonsa wokusebenza Martech Zone sha… kuze kube namuhla.
Uphawu oludala oluthi “M” ngokuyisisekelo lwalungumfanekiso olungiswe kancane engiwuthenge ngokuxhamazela ngemuva kokushintsha isizinda. Bekucacile impela, bekungamele lutho, futhi bekungikhathaza njalo lapho ngibona.
Umklami obesebenza ku- DK New Media ilogo ibone ukuthi i-ejensi yethu isebenze ngezindlela ezihlukile nezinobuciko ukukhulisa imiphumela yamakhasimende ethu. Uphawu empeleni lukhangisa kwesobunxele futhi k kwesokudla, kepha ngezindlela ezihlukile ezisekela umcibisholo obheke phezulu.
Bengihlale ngingumlandeli ohlaza okwesibhakabhaka nge-logo yami futhi, kupholile, kuyadambisa futhi kuyaqinisa idolo. Ngakho-ke, kunokuba uqale ekuqaleni ngophawu olusha lwe Martech Zone, Ngaqaqa futhi ngaphinde ngahlanganisa i- DK New Media logo. Ukufana kubalulekile njengoba ngifuna ukufaka uphawu ku-ejensi kanye ne-blog ngokufanayo.
Kungenzeka kungabonakali, kepha ilogo ihlanganisa i-m, t, no-z… ukuyifanekisela martech zeyodwa. Ngibe nobumnandi bokuqamba izibonelo eziningi ngaphambi kokugxumela ku-illustrator ngiyakhe. Kusengavumelani kangako, ngakho-ke ngikholwa ukuthi imele le bhulogi.
Kanye nelogo, ngikhanyisile futhi ngaguqula ingqikithi ku- lindokuhlemazibuko kanjalo. Uma ufunda ngalokhu encwadini yethu yezindaba, qiniseka ukuthi uchofoze bese ubheka. Nginciphise inani lombhalo, ngiqondise isihloko namafonti omzimba ukufundeka okuthuthukisiwe, ngaze ngafaka nemibala imikhakha (ngingahle ngiyidinge ukuyenza).
Enye yezinhloso zami kulo nyaka ukukulalela kakhudlwana bese empeleni ngiqala ingxoxo nawe… ngishintshela izithameli zami emphakathini. Ngakho-ke, impendulo iyamukelwa futhi iyakhuthazwa! Ngazise ukuthi yini ongathanda ukuyifunda kabanzi nokuthi ngingayithuthukisa kanjani isayithi nama-podcast.
Tags: Ukufaka uphawuDK New Medialogo
Welcome Message Lessons from Email Ochwepheshe